छिमेकी ललकार्ने प्रवृत्ति- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
‘सी भ्रमणको सन्दर्भ’ विषयक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको लेख चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको सेरोफेरोमा रही चीनकै प्रशंसामा केन्द्रित देखिन्छ  । तथापि चित्रमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको खुम्चिएको अनुहार अनि नेपालसँग अप्ठ्यारो भएजस्तो गरी प्रस्तुत भएको तस्बिरले धेरै कुरा संकेत गरेको पनि मान्न सकिन्छ  ।
लेखकले १३ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र भएको चीनको मात्र २.५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बोकेको भारतसँग प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । चीनको विस्तारित आर्थिक र सामरिक प्रभावका कारण अमेरिका लगायतका शक्तिशाली देश थर्कमान भएको बताएका छन् । सन् १९६२ मा चीनसँग हारेको भारत उसको सामु परेपछि नौ–नारी गल्ने भन्नेजस्ता असान्दर्भिक, एकपक्षीय, प्रशंसाभरी शब्दले न लेखको गरिमा बढाएको छ नत दुई छिमेकीसामु हाम्रो नवीन कूटनीतिक दृष्टिकोण स्थापनामा बल पुगेको छ । सोबाहेक लेखकले दक्षिणी छिमेकीलाई ललकार्न चिनियाँ रेलमार्ग एकमात्र विकल्प रहेको कुरा उल्लेख गर्न पनि भ्याएका छन् । वास्तवमा चीन, भारत र नेपालसँग जोडिएका अनगिन्ती सवालसँग लेखकको ध्यान पुगेको देखिँदैन । भारतका रिलायन्स, टाटाजस्ता अनगिन्ती ठूला कम्पनीहरूले चीनमा लगानी गरी त्यहाँका लाखौं जनतालाई रोजगारी दिएको कुरा उल्लेख गर्न भने लेखक चुकेका छन् । नचाहिँदो कुराको बढाइचढाई गरेर पक्ष/विपक्षमा लाग्ने क्रम जारी रह्यो भने हामी दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ १०:०९
योपालि पनि रैतीलाई टीका
दसैंको टीकाको हामीलाई हतार छ  । कसैलाई राष्ट्रपतिको हातबाट टीका लगाउने त कसैलाई प्रधानमन्त्रीको हातबाट  ।
पछिल्लो समय आफ्नो कार्यालयका हाकिमहरूका हातबाट टीका लगाउने, फोटो खिच्ने र फेसबुकमा पोस्ट गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । अझ राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मकाहरूले राजकीय परम्पराले टीका लगाउने चलन कायमै छ । किन हाम्रो समाज अझै पनि राजा–रैतीको स्थानबाट माथि उठ्न सकेको छैन ? बूढा भएका बाबुआमालाई अन्तै कसैको जिम्मा लगाएर किन घण्टौं शीतलनिवासको लाइनमा खडा हुन पुग्छ ? हामीले समयअनुसार व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौं तर त्यही अनुरूपको सोचमा भने परिवर्तन कहिले आउँछ ? विजयादशमीको दिन आफ्नो कुल र आफन्तमाझ रहेका ज्येष्ठ नागरिकको हातबाट टीका लगाउने हो । यहाँ त व्यक्ति ठूलो होइन उसको पद, हैसियतबाट टीका ग्रहण गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । अतः दसैंको यो टीका बहाना भएको छ । धेरैलाई राजा बनेर रैतीलाई जस्तो टीका लगाउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ ।
– रामकृष्ण बराल, काठमाडौं